ANN ARBOR ရှိအကောင်းဆုံးပီဇာနေရာများကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် - နှုန်းထားများ
နယူးယောက်ရှိ GOAT အများဆုံးဒေသမှ (အမေရိကန် - Guido-est Of All Time) ကိုးကွယ်သောအီတလီ - အမေရိကန်တစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အီတလီအစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာသို့မဟုတ်နှစ်ခုသိသည်ဟုသင်ယူဆနိုင်သည်။ ကောင်းပြီကောင်းပြီ ... ကောင်းပါတယ် ဒါဟာငါအခြေခံအားဖြင့်ငါစားအားလုံး။ ငါ marinara အရူးဖြစ်ဝန်ခံ။ သငျသညျအလိုတော်ရှိလျှင် cannolis တစ် ဦး ဝါသနာရှင်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင် Olive ဥယျာဉ်၌နှစ်ကြိမ်စားခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်၏အဖွားသိခဲ့ပါကသူမသည်ခရစ်စမတ်အကြိုညစာစားပွဲတွင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းကိုအစေခံမည်ဟုပြောပါရစေ။
ကျွန်ုပ်၏သွေးစီးဆင်းမှုသည်သဘာဝအတိုင်း parmesan နှင့် soppressata galore နှင့်ပြည့်နှက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အီတလီခဲဖွယ်စားဖွယ်များအားလုံးအတွက်အရသာရှိသောအရသာရှိသည်ဟုထင်ချင်ပါသည်။ မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားတိုင်းသည်ခွေးပေါက်စများကိုမုန်း။ စိတ်မရှိသူများကိုတားမြစ်ခြင်း - မွန်းတည့်ချိန်သို့မဟုတ် Skeeps လွန်ပြီးသည်ဖြစ်စေဘယ်သောအခါမျှတက်။ မရနိုင်ပါ။
ဒါမှန်ပါတယ် ... ပီဇာ။
ငါထိုသူအပေါင်းတို့ကိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ငါနင့်နယူးယောက်အထပ်နှင့်နီးစပ်သောအရာတစ်ခုခု (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ကိုရှာဖွေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောသည့်အခါကျွန်ုပ်၏ဖခင်ကို ၀ မ်းနည်းစွာမျက်ရည်ကျခဲ့စဉ်ကကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်သည်မြင့်မားသောအချက်များရှိသည်။ ထိုအခါငါထိုကဲ့သို့သောငါ့အမှိုက်သရိုက်ဘူးထဲမှာသေတ္တာထဲက3ရက်ကြာဒိန်ခဲပေါင်မုန့်ကိုစားပုံကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း, အမှန်တကယ်ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကျ၌ငါ့အဘကိုခေါ်ခြင်းကဲ့သို့ငါ့အနိမ့်အချက်များရှိခဲ့ပါတယ်။ (နောက်တစ်နေ့တွင်သူကငါ့ကိုပုတီးစိပ်ပုတီးပို့သည်။ )
နောက်ထပ် adieu မရှိဘဲ, ဒီမှာသင်မီချီဂန်ကျောင်းသားများကိုကိုက်စားခြင်း, မျှဝေနှင့်ဤ mozzarella ကောင်းမြတ်ခြင်း ... သို့မဟုတ်မကောင်းမှုကိုကျော် sobbing တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအမ်း Arbore အတွက်အကောင်းဆုံးပီဇာအဆစ်၏ငါ၏အဓိပ္ပါယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ၏အမကြာသေးမီကအတိတ်ကာလ၌ငါနှင့်အတူဘဲလ်ရဲ့ပီဇာဖမ်းပြီးငါ့အဆွေခင်ပွန်းတစ် ဦး ကိုတောင်းအပေါ်သို့သူတို့ကဟားဟား, သင်ကဘယ်လိုယစ်မူးမူတည်နှင့်အတူတုန့်ပြန်! အင်္ဂါနေ့မှာညနေ ၂ နာရီပါ။ ငါမင်းကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပီဇာကိုမြင်ယောင်စေချင်တယ်။ အေးခဲနေသောပေါင်မုန့်ပေါ်တွင် Play-Doh ကိုအဖြူနှင့်အနီရောင်ပစ်နေသောကလေးငယ်တစ် ဦး ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သငျသညျဘဲလ်ရဲ့သမ္မာသတိရှိကြလော့စားရန်ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, သင် Markley သို့မဟုတ် Luigi, သင်၏သွား - ရန် Mario Kart ဇာတ်ကောင်ကနေသင့်ရဲ့အခန်းဖော်ရဲ့ဖြစ်စေ, သင်တွေ့ဖူးသမျှအီတလီလူတစ် ဦး စော်ကားနေကြသည်။ သူကဒီမထိုက်ပါဘူး, Luigi မှားယှငျးပါဘူး။
ငါကွင်းဆက်ပီဇာစားသောက်ဆိုင်များန်းကျင်အခါငါအခြေခံအားဖြင့်ဂန္ထဝင်အန်ဖို့အေးစက်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါလည်းငါဘက်လိုက်, ဒါပေမယ့် Domino ရဲ့ပီဇာ (နီးပါး) စာရင်း၏အောက်ဆုံးစေသည်။ သငျသညျမုန့်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအပေါ်အချို့သော marinara များအတွက်အပူတပြင်းလျှင်, ဒါဟာအဆင်ပြေပေမယ့်အကြောင်းပါပဲ။ သငျသညျအခြို့သောဒိုမီနိုရဲ့အမိန့်သွားနေလျှင်, ကျိန်းသေဘရွတ်ကလင်းစတိုင်ကိုသွားပါ။ ထိုမျှမကသောကလေးတွေဒီနေ့ကြိုးစားနေကြတယ်လိင်အသစ်အနေအထားမဟုတ် (သို့မဟုတ်ပါက? Idk) ။
8. ပီဇာ Bob ရဲ့
ဟေ့ငါစက္ကန့် 30 အတွင်း max ကိုငါ့ gullet ချတစ်ခုလုံးကိုပီဇာပိုင် shoving များအတွက်အားလုံးပေါ့, ဒါပေမယ့်အမည်ဖြင့်ပီဇာနှင့်အတူပူးတွဲဘယ်လိုတစ် ဦး ချင်းစီအချပ်မရောင်းသလဲ? ငါဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကြောက်မက်ဘွယ်သောရှိသည်သောကောလာဟလများသောတူညီသောနေရာခန့်မှန်း။ UT, ငါဆိုလိုတာကတစ်ခုလုံးပိုင် - ဆိုလိုသည်မှာဂိမ်းစိန့်ပြည်နယ်စိန့်ကိုလမ်းလျှောက်။ ဂိမ်းနေ့၌ Big House သို့သွားရန်ပီဇာဘော့၏ chipati နှင့် milkshake တစ်ခုသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်အရက်သောက်သောအချပ်ကိုနှိပ်ပါ။ သူတို့ကျောင်းဝင်းရှိမိန်းကလေးများအားလုံးသည်နွေ ဦး ရာသီအတွက်အဆီနည်းစေလိုသည်။
ဒိန်ခဲကိုဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာ၊ ဒါကကောလိပ်မဟုတ်ရင်ငါဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ Backroom Pizza သည် Rick's မှမဟုတ်ဘဲ BREATHS အဆင့်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ညဥ့်နက်ပိုင်းတွင်အလွန်အဆင်ပြေစေရုံသာမကအလေးအနက်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်လည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါချပ်ကြောင်းကြီးမားသောမဟုတ်များနှင့်စူပါချောကျိကျိဖြစ်ကြပေမယ့်သင်က Rick ရဲ့သွားပြီးနောက် Backroom မရခဲ့ဘူးလျှင်, သင်ပင် Rick ရဲ့သွားခဲ့တာလဲ
ငါ Cottage Inn ကိုပိုမိုမြင့်မားသောဒိုမီနို၏စဉ်းစားလိုသော်လည်းပိုမိုပါးလွှာသောအပေါ်ယံလွှာနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်အတူ။ Cottage Inn ရဲ့ကြီးမားတဲ့အားနည်းချက်ကဘယ်လောက်ဝေးသလဲ - Rick ရဲ့အိမ်ကနေလမ်းလျှောက်ထွက်မလာတာသေချာတယ်။ သငျသညျကြီးမားသောအမိန့် + အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့သက်တမ်းတပ်မက်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမယ့်ကောင်းပါတယ်။ သို့သော်အဓိကသော့ချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ပေါင်မုန့်ကဲ့သို့သူတို့၏ပေါင်မုန့်များနှင့်အပေါ်ယံလွှာထောပတ်များဖြစ်သည်။ ကဲ့သို့ပင် 'ပီကပ်စိုသည် Land O'Lakes နှင့်ပီဇာပန်းချီကောင်တာနောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်' ။ လိုချင်သည်မှာ 'မင်းရဲ့ muffin ပီဇာကိုထောပတ်ပေးဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုမင်းတို့ပေးခိုင်းမလား။ '
ငါ့ရဲ့အတန်းဖော်တွေကပီတာစားသောက်ဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့ Chipotle (um, Chipotle ကပိုင်ဆိုင်ထားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်) လို့မှတ်ချက်ပြုလိုက်တယ်။ Pieology ကငါတို့စာရင်းထဲမှာနောက်ထပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ဒေါ်လာ ၇.၉၅ ဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိသောပီဇာတစ်ခုလုံးသည်ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ် ဦး ၏ဘဝတွင်ရှုပ်ထွေးလွန်းလှသည်မဟုတ်ပါ။ သင် (သင်တစ် ဦး ချင်းစီချပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်လွှင့်သည့်) သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ရှင်ကိုမုန့်စိမ်းသုံးခွက်၊ ဝက်အူချောင်းခုနစ်လုံးနှင့်သင်တောင်းနိုင်သောဒိန်ခဲ၊ အသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းသည်ဂန္ထဝင်စားသောက်ဆိုင်ပုံစံပီဇာမဟုတ်သော်လည်း Chipotle ကိုဂန္ထဝင် Burrito ဟုသင်သတ်မှတ်မည်လော။ ပြီးတော့မင်းကတစ်ပတ်ကို ၃ ကြိမ်လောက်ရသေးတာပေါ့။ ဒါကငါထင်တယျ။
NeoPapalis သည် A ^2တွင်အနိမ့်ဆုံးပီဇာနှင့်အတူအမ်းအာဘိုရားအရွားဆုံးသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Neapolitan အဘိဓါန်ပီဇာတွင်အထူးပြုလုပ်ထားသောဤပူးတွဲသည်အရသာရှိရှိပီဇာထိပ်ဖျားမှသည်ပြီးပြည့်စုံသောအရသာရှိသောသုပ်များအထိအရာအားလုံးကိုလတ်ဆတ်စေသည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာ NeoPapalis သည်အလွန်ဝေးကွာခြင်းဖြစ်သည်။ သင်အတန်းသို့သွားရာလမ်းသို့မဟုတ်ဘားမှအိမ်သို့မသွားသောလမ်းကိုသင်ဘယ်တော့မျှမဖြတ်သန်းနိုင်ပါ။ သင်ထိုနေရာတွင်ရောက်နေလျှင် North Beach Bianca ပီဇာကိုသေချာစွာမှာယူပါ။ နောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကမဟာတံတိုင်းကြီးရဲ့ပုံပန်းသဏ္howာန်ကိုကြည့်ပါ ဦး ။
ငါ၏အ moms ကားထဲတွင် im တံမြက်စည်းတံမြက်စည်း
Ahhh, ပီဇာအိမ်။ ပီဇာအိမ်သည်မိသားစုစုရုံးမှုများတွင်သင်လပေါင်းများစွာစကားမပြောခဲ့ဖူးသောဝမ်းကွဲဝမ်းကွဲတစ် ဦး နှင့်တူသည်။ သို့သော်သင်အမီလိုက်ရန်သင်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှဘယ်တော့မှမတက်တော့သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ပီဇာအိမ်သည်အန်းအာဘိုရ်ည်ညတွင်နံနက် ၁ နာရီညဥ့်နက်သောအစားအစာဖြစ်ရုံသာမကဘဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ထံပို့ဆောင်သည့်အတိုင်းဒိန်ခဲ၊ ဖီတာပေါင်မုန့် (အရသာသိပ်မရှိသည့်) အရသာရှိသောကြောင့်ထိပ်တန်းဆင့်ဖြစ်သည်။ marinara နှင့် chipati ငံပြာရည်အချို့ကိုဖြည့်ပါ။ သင်အိမ်မှအိမ်သူအိမ်သားများ၊ ဒါမှမဟုတ်သင်သာမန်သောကြာနေ့ညပဲငါဖြစ်လျှင်
ကောင်းကင်၌ ၇ မိနစ်အတွင်းသင်ဒုတိယမြောက်အပျိုစင်ဘ ၀ ကိုဆုံးရှုံးသွားသောဗီရိုအနေဖြင့်နှစ်ဆဖြစ်စေနိုင်သည့်သေးငယ်သောပီဇာအဆက်မပြတ်အတွက် South U Pizza သည်ပြင်းထန်သောမီးကိုထုပ်ပိုးပေးသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေတွက်ခြင်းတွင်နံပါတ် ၂ နေရာသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ ၎င်းသည်စူပါအမြန်နှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာပြီး ၀ န်ဆောင်မှုများစွာရှိပြီးနယူးယောက်ပီဇာအချပ်နှင့်ဆင်တူသည်မှာသေချာသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့လူတွေဟာနေ ၀ င်သွားတဲ့အချိန်မှာတောင်ပိုင်းကနေချပ်များကိုတကယ်သိမ်းဆည်းရမိ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တကယ်စားတာကိုမှတ်မိချင်တာလေ။
နင် Yo တောင်ငါ၊ မင်းအတွက်တကယ်ကိုဝမ်းသာတယ်၊ Imma ကမင်းကိုပြီးအောင်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် NYPD မှာအန်းအာဘိုမှာအကောင်းဆုံးပီဇာရှိတယ်။ ငါနှင့်အတူငြင်းခုံရန်ပင်မကြိုးစားပါနှင့်၊ The Ref တွင် angsty procrastinator, သင်သည်သင်၏ဘဝ၌အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် NYPD တွင်တက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်စက္ကန့်တိုင်း၌ပျော်မွေ့ကြောင်းသင်သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကthinုံပါးလွှာမုန့်စိမ်း။ ဒီ airy, decadent အပေါ်ယံလွှာ။ ဒိန်ခဲဖြည်းဖြည်းဆန့်ထုတ်လိုက်သည့်အပိုင်းအစမှကိုက်သည် မှနေ၍ သင်အိမ်ပြန်ချင်သည်ဟုထင်သောကောင်လေး၏ချောချောမွေ့မွေ့နှုတ်ခမ်းများဆီသို့အလင်းများမှေးမှိန်နေသောနေရာရှိ Skeeps တွင်ပြန်လာသည်။ NYPD အမျိုးအစားသည်သင်လိုချင်သမျှအရာအားလုံးဖြစ်ပြီးနံနက်မှသည်အထိဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများမှအတွေးအခေါ်ပါမောက္ခများအထိပါ ၀ င်သည့်စားသုံးသူများနှင့်ကျောင်းသားများမှကျောင်းသားများအထိ - NYPD ထက်မျိုးစုံအတွက်မည်သည့်အရာကပိုကောင်းသနည်း။